Eli nqaku liyinxalenye yechungechunge lwethu kwikhambo leqhawe, ngokuqala ngeHarri's Journey Intshayelelo kunye neArchetypes yohambo lweHero .
Umcebisi ngenye yeengqungquthela ezithathwe kwiqondo elithile likaCarl Jung kunye neengcamango ze-mythic zikaJoseph Campbell. Apha, sibheke kumcebisi njengoChristopher Vogler encwadini yakhe, "Uhambo lombhali: Ulwakhiwo lwamaNgqungquthela kubalobi." Bonke abathathu balaba bantu "banamhlanje" basinceda ukuba siqonde indima yomcebisi ebantwini, kwiimbali ezikhokela ubomi bethu, kubandakanywa iinkolo, nakwiindaba zethu zokubhaliweyo , nto esiza kugxininisa apha.
Ngubani na uMenzi?
Umcebisi ngumntu omdala osisilumko okanye ibhinqa ngalinye iqhawe lihlangana ngokukhawuleza kwimbali eyanelisayo. Indima ngenye yeempawu ezibonakaliswa kakhulu kwiincwadi. Cinga i-Dumbledore evela kuHarry Potter, kwi-Q kwi-series ye-James Bond, i-Gandalf esuka eNkosini yeeNgxowa, i-Yoda esuka kwi-Star Trek, i- Merlin evela ku-King Arthur kunye neKtights ye-Round Table, u-Alfred waseBatman, uluhlu lude kakhulu. Nangona uMary Poppins ungumcebisi. Bangaphi abanye onokucinga ngazo?
Umcebisi umele ukuhambelana phakathi komzali nomntwana, utitshala nomfundi, ugqirha kunye nesigulane, unkulunkulu nomntu. Umsebenzi womcebisi ukulungiselela iqhawe ukuba lijongane nolwazi olungavumelekanga, ukuba lwamkele i-adventure. U-Athena, unkulunkulukazi wobulumko , ugcwele amandla, angenakuguqulwa kwe-archetype yomcebisi, uVogler uthi.
Kwiindwendwe ezininzi zokuhamba kweqhawe, iqhawe liyabonakala kuqala kwihlabathi eliqhelekileyo xa ifumana ifowuni kwi-adventure .
Iqhawe lethu livumi ukungavumi ukubiza ekuqaleni, mhlawumbi ukwesaba oko kuza kwenzeka okanye kwanelisekile ngobomi njengoko kunjalo. Kwaye ke umntu onjengeGandalf ubonakala eguqula ingqondo yeqhawe, kwaye anike izipho kunye nezixhobo. Yiyo "intlanganiso kunye nomcebisi."
Umcebisi unikela iqhawe, ulwazi, kunye nokuzithemba okufunekayo ukunqoba uloyiko lwakhe kunye nokujongana nohambo, ngokutsho kukaChristopher Vogler, umbhali "Uhambo lomlobi: Ulwakhiwo lwe-Mythic." Gcina ukhumbule ukuba umcebisi akumele abe ngumntu.
Umsebenzi ungenziwa yimephu okanye amava avela kwi-adventure yangaphambili.
Kwi-Wizard yase-Oz, uDorothy udibana neengcebisi zabacebisi: uProfesa Marvel, uGlinda uMlumbi oLungileyo, iScarecrow, i-Tin Man, iNdenge yeCowardly kunye noMncedisi ngokwakhe.
Cinga ngesizathu sokuba ubudlelwane beqhawe kunye nomcebisi okanye abacebisi kubalulekile kwibali. Esinye isizathu sivame ukuba abafundi baxhomekeke kumava. Bayakuvuyela ukuba yinxalenye yobudlelwane obuvakalelwa phakathi kweqhawe nomcebisi.
Ngubani abacebisi bakho kwibali? Ngaba zicacile okanye zifihlakeleyo? Ngaba umbhali wenza umsebenzi omhle wokuguqula i- archetype entloko yakhe ngendlela emangalisayo? Okanye ngaba umcebisi unkulunkulukazi wefestile okanye umlindi omhlophe. Abanye abalobi baya kusebenzisa ukulindela komfundi waloo mcebisi ukuba bamangalise ngomcebisi ohluke ngokupheleleyo.
Jonga abacebisi xa ibonakala kubonakala ibali. Abaphathi bezo zinto banikezela ngoncedo, iingcebiso, okanye izixhobo zemilingo xa zonke zibonakala zibhujiswa. Zibonisa into yokuba sonke sifanele sifunde izifundo zokuphila kumntu okanye into.
Ezinye iArchetypes kwiindaba
Iinjongo zehambo leHero
Umthetho owodwa (kwikota yokuqala yebali)
Ukuwela i-First Threshold
UMthetho weBini (isahlulo sesibini nesithathu)
Iimvavanyo, amaLelanki, iintshaba
Umvuzo (Ukuthatha Inkemba)
UMthetho weThathu (kwikota yesine)
Okulandelayo: Ukuwela i-First Threshold kunye nezilingo, iintshaba kunye nabadlali
Ukurekhoda iingcebiso ze-studio
Isihlandlo seenkcubeko zase-Andean zaseMzantsi Melika